Budata Microsoft Toolkit 2022 v2.7.4 maka Windows
Budata Microsoft Toolkit 2022
Ikpo okwu: Windows |dị: v2.7.4 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (64.21 MB)
Budata Microsoft Toolkit 2022,
Ekele maka mmemme nbudata Microsoft Toolkit, nke na-enye gị ohere ịnye ikikere sistemụ arụmọrụ nke ezinụlọ Microsoft na Office 2010 2013 2016 2019 windows server 7 8 8.1 10, ị ga-eme usoro ikikere nime obere usoro ma jiri Office. ngwaahịa ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ nefu. Iji zere esemokwu, ịnwere ike iji ngwa Microsoft Toolkit hazie taabụ ntọlite ​​​​nke na-arụ ọrụ nke ọma na ndabere, ma ị nwere ike iji ngwaahịa niile dị nokpuru ikike.
Tupu ịwụnye mmemme Microsoft Toolkit, nke nwere nrụnye dị mfe, na kọmputa gị, ịkwesịrị imechi ngwa Defender Windows nke na-arụ ọrụ na kọmputa gị. Ọ ga-abara gị uru karịa itinye otu usoro ahụ mgbe ị na-eme usoro ikike. Ị nwere ike ịme mgbanwe nke gị nụzọ dị mfe na ihuenyo na-egosi na ị ga-eji naanị otu bọtịnụ rụọ usoro ikike niile.
Nime ihe omume Microsoft Toolkit, nke na-eji ọtụtụ nkwalite na ihe ọhụrụ na ụdị emelitere mgbe niile, ị ga-ewepụ kpamkpam Windows Defender ewepu na-eme noge ikikere nke Windows 8.1 na Windows 10 sistemụ arụmọrụ, ị ga-arụkwa ikikere ugbu a. usoro yana nkwado Wndows Server 2021. Iji Microsoft Toolkit, nke dị mfe iji, ị ga-eme usoro ikikere noge dị mkpirikpi ma ị ga-eji ngwaahịa ụlọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ nenweghị nsogbu ọ bụla.
Sistemu eji arụ ọrụ akwadoro
Ụdị Office akwadoro
Ọ bụrụ na ịchọghị iji Microsoft Toolkit 2022, dị ka ndị otu Softmedal, anyị na-akwado gị ngwanrọ Kmpico ama ama nụwa. Ị nwere ike ibudata ma jiri ngwa Kmpico 2022 na-akwụghị ụgwọ site na ịpị njikọ Kmpico na-acha anụnụ anụnụ.
Microsoft Toolkit 2022 Ụdịdị
Nha faịlụ: 64.21 MB
Kacha ọhụrụ na: 28-12-2021
7-Zip bụ sọftụwia na - akwụ ụgwọ nefu ma dị ike nke ndị ọrụ kọmputa nwere ike ịpịkọta faịlụ na...
VLC Media Player, akpọkarị VLC netiti kọmputa ọrụ, bụ a free media player mepụtara nihi na ị...
DirectX bụ usoro nke ihe eji arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows nke na-enye ohere sọftụwia kachasị...
Bandizip pụtara dị ka mmemme ngwa ngwa ngwa ngwa, ọkụ na free na ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na...
Cemu - Wii U emulator bụ mmemme emulator ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu Wii U na...